Projects Factory, Ababoneleli - China Projects Manufacturers
Ezizezona Store Showcase
Ezona ivenkile shop ulwenziwo window kwiqamza nasezindongeni yeprojekthi
ngomphathi ku 18-11-16
iphulo lokwazisa esingabizi yinto ebekelwe flagship enkulu eFransi, usebenzisa inkwenkwezi top TS-BW003 bubble nkqo eludongeni. Le mveliso 2.2 yeemitha ukuphakama, iziimitha 8 ububanzi. Yenziwe ka-4 iindonga zamazwi kunye ububanzi ezifanayo 2meters. Ukongeza izinto stylish ezintsha kwi window libonisiweyo ...
Mall indawo ubumnandi umdaniso amanzi kwiqamza project wall siko TS-BW003
Ummandla lounge kweholo shopping mall kufakwa Top Star Technology imodeli TS-BW003, ubungakanani yemveliso 2.4 yeemitha ukuphakama, iziimitha 0.5 ububanzi. Umbala LED izibane utshintsho kunye komoya nokuthantamisa amagwebu kwemali, nto leyo iba ubuhle eyodwa mall evenkileni, ukudala comfo ...
isiphelo High-dance amanzi club kwiqamza udonga ulwenziwo yeprojekthi yeprojekthi TS-BW002
udonga bubble nkqo ukuba iiprojekthi obuphezulu yokutyela TS-BW003
Isiphelo eliphezulu-project yokutyela ulwenziwo isebenzisa Top Star Technology modelTS-BW003. Ubude imveliso kangangeemitha ezili-15, ukuphakama 0.5 yeemitha. Kuyinto kakhulu obuphezulu emoyeni kwaye kakhulu uphucula bume yokudlela. Kwangaxeshanye, umbala LED izibane utshintsho kunye komoya nokuthantamisa of bubbl ...
bubble udonga project isicelo uhombiso nkqo ukuba iihotele TS-BW003
yodidi-project German inyoba ehotele isiko, esebenzisa isimbo Top Star Technology TS-BW003, ubungakanani imveliso iimitha ezi-3 ukuphakama, ububanzi 0.5, kukho lilonke leeyunithi 13. Uyilo unique eludongeni iqamza, utshintsho LED ukukhanyisa kunye ukuhamba amaqamza zidibene ukwenza isiphumo olubonakalayo entle, abe ...
Round Tube Bubble Wall ulwenziwo Isicelo Project For Hotel TS-BW004
I-US yodidi-ihotele yeprojekthi ahla- ulwenziwo usebenzisa imodeli technology star top: TS-BW004 isimbo, Round Tube bubble eludongeni, ubungakanani imveliso iimitha ezi-3 ukuphakama, ububanzi 1.2 iimitha, iiyunithi-5 zizonke, esesibhakabhakeni kakhulu, isiphelo ophezulu. Uyilo unique eludongeni iqamza, ukuhlanganiswa LED ukukhanyisa kunye gen ...
Dance Water Bubble Wall Ofisi Application Project TS-BW002
Office udonga ulwahlulo / screen, besebenzisa ubugcisa modeTS-BW002 Top Star dance amanzi kwiqamza eludongeni. Ubungakanani imveliso 2.4 eemitha eliphezulu kwaye 1.2 ububanzi. Yokuba ngokoqoqosho kwaye aluncedo, mihla elula, ezise ukuzonwabisa olubonakalayo ukuba abathengi ukutyelela, enze abantu bazive uxolo yaye bekhululekile ...
Nkqo bubble udonga isicelo ekhaya lokubhalela yeprojekthi TS-BW003
ekhaya lokubhalela. It uwenza Top Star Technology TS-BW003, kunye kubude 2.4 yeemitha kunye ububanzi 1.2 yeemitha. Isetyenziswa ekhitshini kunye kwigumbi lokuphumla iindonga hlulo. Kuyinto mihla yaye ilula, kwaye ubuntu. Umbala LED izibane utshintsho kunye komoya nokuthantamisa le amaqamza kudala comf ...
Nkqo bubble udonga isicelo uhombiso ekhaya yeprojekthi TS-BW003
ekhaya lokubhalela. Ukwamkela i Top Star Technology TS-BW003, ukuphakama imveliso 2.4 yeemitha yaye ububanzi buziimitha 0.8. Isetyenziswa ukuhombisa yokutyela. Kuyinto mihla yaye ilula, kwaye ubuntu. Umbala LED izibane utshintsho kunye komoya nokuthantamisa le amaqamza kudala lethuba ...